जीवनको वास्तविक लक्ष्य ! – Chitwan Post
हामी जीवनमा धेरै लक्ष्यहरू बनाउँछौँ । तिनै लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि कम्मर कस्छौँ । तर, हामी एउटा लक्ष्यलाई पनि पूरा गर्न सक्दैनौँ । किनभने, हामीलाई सफलता पनि चाहिएको छ अनि प्रतिष्ठा पनि चाहिएको छ । यसका साथमा अन्य धेरै कुराहरू पनि चाहिएको छ । ती सबै कुराहरूमध्ये एउटा कुरालाई हामी बुझ्दैनौँ, “हामी को हौँ र हाम्रो जीवनको वास्तविक लक्ष्य के हुनु पर्दछ ?” हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराका बारेमा त सारा संसारले भनिरहन्छ । तर, हामीले आपैmँलाई “म के चाहन्छु” भनेर कहिल्यै सोध्दैनौँ भने जीवनको वास्तविक लक्ष्य त अधुरो रहन्छ ।
एउटा कथा छ । एक पटक अकबरले वीरबललाई भने, “वीरबल ! हाम्रो दरबारमा ठूला–ठूला विद्वान्हरू छन् । अब तिमी यसो गर, हाम्रो दरबारमा पाँचजना सबैभन्दा मूर्ख मानिसहरूलाई खोजेर ल्याऊ ।”
वीरबलले भने, “हुन्छ, महाराज !”
वीरबल खोज्नका लागि निस्के । उनी मनमनै सोच्न थाले, अब पाँचजना मूर्ख कहाँ पाइन्छ होला ?
त्यत्तिकैमा एकजना मानिस आफ्नो गधामा बसेर आइरहेको देखे । उनले आफ्नो टाउकोमा दाउराको भारी राखेका थिए ।
वीरबलले सोधे, “हजुर ! तपाईं त गधामा बस्नुभा’छ अनि त्यो भारीचाहिँ किन टाउकोमा राख्नुभएको त ? त्यो भारीलाई गधाकै ढाडमा राखेको भए पनि हुन्थ्यो नि, हैन र ?”
ती मानिसले उत्तर दिए, “तपाईं पनि नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईंलाई थाहा छैन यो विचरा गधा दिनभरि काम गरिरहेको हुन्छ । मैले यो भारी आपैmँले बोकेँ भने त कमसेकम गधालाई बोझ कम हुन्छ !”
वीरबलले सोचे, पहिलो मूर्ख त भेटियो ! वीरबलले उनलाई भने, “हजुर ! तपाईँ भोलि राजमहलको बाहिर आएर मलाई भेट्नुहोस् है । म तपाईँलाई केही उपहार दिनेछु ।”
ती मानिसले भने, “हुन्छ !”
वीरबल अलिक अघि बढ्दै जाँदा एक जना मानिस जमिनमा सुतेर हावामा खुट्टा चलाउँदै थिए । उनी हात अगाडितिर पैmलाइरहेका थिए ।
त्यो देखेर वीरबलले उनलाई सोधे, “हैन, यो के गरिरहनुभएको ?”
त्यसपछि उनले भने, “मेरी श्रीमतीले पर्दाका लागि कपडा नापेकी थिइन् । त्यो यति नै नापको थियो । त्यसैले मैले यी हातलाई त्यही नाप अनुसार राखेको छु, त्यो भुल्छु कि भनेर त्यो नापअनुसार हात पैmलाएर हिँडिरहेको थिएँ । हिँड्दाहिँड्दै मेरो खुट्टा चिप्लियो र म लडेँ । तर मैले के सोचेँ भने अब रोकिनु त हुँदैन, त्यसैले म आफ्ना गोडाहरु हावामा चलाइरहेको छु ।”
वीरबलले उनलाई भने, “हजुर ! तपाईँ भोलि राजमहलमा आएर मलाई भेट्नुहोस् है ।”
रात परिसकेको थियो । एकजना व्यापारीले बत्तीकोे मुनितिर केही खोजिरहेको वीरबलले देखे । वीरबलले छेउमा गएर सोधे, “तपाईं यहाँ के गरिरहनुभएको छ ?”
उनले भने, “म आज दिउँसो जङ्गलमा गएको थिएँ । त्यहाँ मैले आफ्ना साथीसँग गफगाफ गरिरहेको थिएँ । थाहा छैन, कसरी हो मेरो औँठी त्यहाँ खस्यो । त्यसैले म यहाँ खोजिरहेको छु ।”
वीरबलले भने, “यदि तपाईँको औँठी जङ्गलमा खसेको हो भने किन यहाँ खोजिरहनुभएको त ?”
उनले भने, “भाइ, तिमी पनि कति मूर्ख रहेछौ । यहाँ उज्यालो छ, त्यसैले यहाँ खोजिरहेको छु । जङ्गलमा उज्यालो छैन, त्यसैले त्यहाँ कसरी भेटिन्छ त ?”
त्यसलाई पनि वीरबलले भने, “हजुर ! तपाईँ भोलि राजमहलमा आएर मसँग भेट्नो’स् है ।”
अर्काे दिन तीनैजना मूर्खहरूले वीरबललाई भेटे । वीरबलले उनीहरूलाई अकबरकहाँ लिएर भेट गराए । उनले अकबरलाई भने, “महाराज ! पाँचजना मूर्ख पाइयो ।” उनले तीनैजना मूर्खका बारेमा जानकारी दिए ।
अकबरले भने, “यी त तीनजना मात्र छन् ।”
त्यसपछि वीरबलले भने, “महाराज ! एउटा मूर्ख त म नै हुँ, जो मूर्खलाई खोज्न गएँ र अर्काे मूर्ख तपाईं हुनुहुन्छ, जसले मूर्ख खोजेर ल्याउनू भन्नुभयो ।”
हामी पनि एउटा धारणा, एउटा विश्वास बनाउँछौँ । वास्तविक कुराका बारेमा सोच्दैनौँ र त्यसमा लागिरहन्छौँ । यस जीवनमा हाम्रो आवश्यकतालाई जान्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । कोही भन्छन्, “यो जिन्दगी पाएका छौ– नोकरी गर, खुब पैसा कमाऊ, नाम कमाऊ ! संसारबाट एकदिन त सबैले जानै छ ।” अनि हामी आफ्नो जीवनलाई कुन राम्रो र कुन नराम्रो भन्दै तौलने गर्दछौँ । तर सृष्टिकर्ताको कृपाले हामीलाई मानिसको जीवन प्राप्त भएको छ । यो मोक्षको ढोका हो । यही जीवनबाट मोक्ष पाउन सकिन्छ । हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्य, जुन वास्तविक लक्ष्य हो, त्यसलाई पूरा गरेपछि आफ्नो जीवनलाई जीवित हुँदै सफल पार्न सक्छौँ ।
(प्रेम रावतको सम्बोधनबाट साभार गरी सम्पादन गरिएको । प्रेम रावत मानवता र शान्तिको विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्नका लागि www.premrawat.com वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । प्रतिक्रियाका लागि [email protected])